छुट्टिको लागि ईमेल मार्केटिंग चेकलिस्ट
Point पोइन्ट ईमेल मार्केटि H हलिडे चेकलिस्ट
सोमबार, अगस्ट 20, 2012 शनिबार, अक्टोबर 25, 2014 Lavon मन्दिर
यो पतन हो जसको मतलब स्कूलको शपिंगमा फिर्ता जोसका साथ छ र विद्यार्थीहरू कक्षाकोठामा फर्कदै छन्। यद्यपि
समय सचेत रहनुहोस् कि यो केवल अगस्त मात्र भएता पनि धेरै व्यक्तिहरूले उपहार विचारहरू खोज्न थालेका छन्। यदि तिनीहरूले यसलाई सही मूल्यका लागि फेला पार्दछन्, तिनीहरू अघि बढ्छन् र खेल अगाडि खरीद गर्न जान्छन्। ती दर्शकहरूको लागि तपाईंको ईमेलहरू राख्नुहोस् र ती खरीददारहरूलाई समात्नका लागि शिल्प ईमेलहरू। अवश्य पनि, तपाइँ तयारी गर्न चाहानुहुन्छ केहि प्रमुख मितिहरू कालो फ्राइडे र साइबर सोमबार हुन्, तर तपाइँले तपाइँका ग्राहकहरूलाई छुट्टीको मौसममा मूल्य प्रस्ताव गर्नुपर्छ।
हलिडे टेम्प्लेटहरू। छुट्टिको वरिपरी ती समयहरू हुन् जुन प्रायः ईमेल मार्केटरहरूले बक्सबाट बाहिर जान सक्छन् र उनीहरूको टेम्प्लेटहरूमा थोरै छुट्टीको फ्लेर थप्न सक्दछन्। अतिरिक्त रचनात्मक सम्भवतः ग्राहकहरूलाई क्लिक गर्न र खरीद गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
सम्झौता र विशेष। तपाईंको ग्राहकहरूलाई अनुस्मारकहरू पठाउनुहोस् किनकि छुट्टीहरू नजिक र नजिक आउँदैछन्। कुपन वा सम्भावित उपहार परिवारका सदस्यहरू, साथीहरू, र बाल बच्चाहरूको शिक्षकहरूको लागि विशेष समावेश गर्नुहोस्। सदस्यहरूले सराहना गर्छन् कि तपाईंले उनीहरूको लागि कार्य गर्नुभयो र तिनीहरूलाई केही विचारहरू दिनुभयो।
मोबाइल। यस बर्षको बिदाको बेलामा उनीहरूको मोबाइल उपकरणहरू मार्फत खरीद गरिरहेका व्यक्तिहरूको संख्यामा ठूलो अप्टिक थियो। यस बर्ष, ti's उचित: तपाईंको साइट मोबाइलको लागि अनुकूलित छ। तपाई निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि सदस्यहरू नेभिगेट गर्न र प्रयोग गर्नका लागि सजिलो छ। यदि होईन भने, तिनीहरू छाडिन्छन् र बरु खरीद गर्न एक प्रतिस्पर्धी भेट्टाउनेछन्।
सामाजिक पाउनुहोस्। आशा छ कि तपाईं आफ्नो ईमेलमा पहिले नै सामाजिक लिंकहरू समावेश गर्दै हुनुहुन्छ। जे होस्, बिदाको वरिपरि, यी थप गर्न र तिनीहरूलाई देखाउनको लागि यो अझै आवश्यक छ! पिन्टेरेस्ट यस वर्ष साँच्चै बन्द छ र धेरै मान्छे यसको प्रति गुरुत्वाकर्षण छ। यदि तपाईंको कम्पनीको एक उपस्थिति छ भने, तपाईं आफ्नो प्रोफाईलमा ग्राहकहरु लाई निर्देशन दिन चाहनु सक्नुहुन्छ उत्पादनहरु हेर्नका लागि र खरीद गर्न।
तपाईको छुट्टी ईमेल योजना लागू गर्न सुरू गर्नका लागि यी थोरै सुझावहरू छन्। अरू कुन सल्लाहहरू तपाईंले सुन्नुभयो र तपाईंको छुट्टी ईमेल अभियानहरूमा थप्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ?
टैग: सम्झौताछुट्टीछुट्टी चेकलिस्टमोबाइल र ट्याब्लेट मार्केटिंगसामाजिक मिडिया मार्केटिङविशेषटेम्प्लेटसमय
Lavon मन्दिर मा डिजिटल मिडिया विशेषज्ञ हो ब्लास्टमीडिया, व्यवसाय-बाट-ग्राहक ग्राहकहरूको रूपरेखा लक्ष्यों, रणनीतिहरू, र कार्यनीतिहरूको लागि संचार योजनाहरू विकास गर्दै।
ब्रान्ड पूर्णता बनाम सामग्री गति
Klout स्कोर पुनर्निर्मित ... र मलाई यो मनपर्‍यो!
अगस्ट 20, 2012 मा 10: 14 AM
ओह... यो पहिले नै योजना सुरु गर्ने समय हो? 🙂